Ny tolotra amin'ny aterineto tsara indrindra amin'ny fandefasana rakitra lehibe tsy misy fisoratana anarana.
Posted by Tranquillus | Jul 13, 2018 | vokatra
Miaraka amin'nyubiquity amin'ny Internet, saika ny rehetra no lasa mahazatra ny fizarana rakitra. Mety ho manahirana anefa izany rehefa mamindra rakitra lehibe. Raha ny fampiasana boaty namany Sary, Yahoo, Gmail… tsy azo atao ny mandefa antontan-taratasy milanja mihoatra ny 25 MB. Amin'ny tambajotra sosialy toy ny Whatsapp, 16 MB ny haben'ny rakitra ambony indrindra. Firaketana an-tserasera goavana. Ka ity no 18 serivisy an-tserasera mba handefa rakitra lehibe ary tsy misy soratra.
WeTransfer iray amin'ny toerana ho an'ny fandefasana rakitra mavesatra ny ankamaroan'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Tsy mitaky fisoratana anarana izany ary mamela anao handefa rakitra 2 Go ao amin'ny famindrana tsirairay, ary miaraka amin'ny olona roapolo miaraka. Ny valin'ny fitahirizana ny rakitrao dia voafetra amin'ny herinandro 2. Mandritra ireo tapa-bolana ireo, ny rakitra rehetra nakarina dia voatahiry ao anaty ordinatera ao amin'ny format ZIP. Raha hanitatra ny fotoana fampiantranoana ny rakitrao an-tserasera ianao mandritry ny herinandro iray na mihoatra ny 4, dia mila mahazo fahazoan-dalana amin'ny tranonkalan'ny mpampanonta ianao.
Alefaso any aiza
Alefaso any aiza est un tranonkala ho an'ny fandefasana rakitra lehibe manana kapila 4 GB. Tsy ilaina ny fisoratana anarana raha mampiasa ny safidy "mandefa mivantana" ianao, tsy izany no izy raha misafidy ny hamorona rohy fampidinana ianao na alefan'i taona. Misy kaody enina miseho eo amin'ny efijeryo aorian'ny fampidiranao ny rakitrao amin'ilay tranonkala. Ity kaody ity dia tsy maintsy ampitaina amin'ny mpandray anao ka ampidiriny ao amin'ilay tranokala eo ambanin'ny boaty fifanakalozan-kevitra "mpandray" izy io mba hampidinana ny rakitra nalefa.
SendBox est un toerana izay manome fahafahana handefasana ny 3 Go Free. Rehefa mametraka ny rakitra ao amin'ilay tranonkala, misy rohy iray dia misy rohy izay handefa mailaka amin'ny mpandray anao. Ny tahiry dia voatahiry any mandritra ny andro 15. Azonao atao ny mampifandray ireo fitaovana ahafahanao miditra, mizara ary mandefa haingana kokoa ny rakitra. Iangavio fotsiny ny rindrankajy amin'ny PC sy ny findainao Android.
Ao amin'ity sehatra ityAzo atao izany famindrana rakitra mavesatra ny volombolony 4 GB. Azo atao ny mamindra eo akaikin'ny rakitra 250 isaky ny famindrana ho an'ny fetran'ny 5 fifindrana isan'andro ao amin'ny TransferNow. Ny fizarana ireo rakitrao dia azo arovana amin'ny tenimiafina iray. Azo alefa amin'ny olona 20 ny rakitra miaraka amin'ny fifindrana iray ihany. Ireo tahiry ireo dia mijanona ao amin'ny tranokalam-pifandraisana mandritra ny andro 8 ho an'ireo olona tsy voasoratra anarana sy andro 10 ho an'ny olona manana kaonty Freemium.
HAMAKY Ahoana ny fomba fiasa amin'ny sehatra malalaka?
Araka ny voalazan'ny anarana, Grosfichiers mamela nymandefa rakitra lehibe amin'ny lanjan'ny 4 Go. Tranonkala tsotra hampiasaina izany. Afaka mandefa mailaka amin'ny 30 amin'ny fotoana rehetra ihany ianao. Tsy maintsy misafidy fotsiny ny rakitra mba hizarana amin'ilay tranonkala. Rehefa navoaka ny rakitra rehetra, dia soraty amin'ny mpandray anao ny hafatra. Azonao atao ny mandefa ny hafatra sy ny antontan-taratasy ho an'ny fifandraisana aminao.
C'est la tranonkala ho an'ny fandefasana rakitra lehibe tonga lafatra. hamotipotika manolotra fampiasana maimaim-poana tanteraka ary mamela anao hamindra rakitra tsy voafetra lanja! Ity tranonkala ity dia tsy misy doka ara-barotra ao anaty interface-ny. Herin'andro iray fara-fahabetsany ny fahamendrehan'ny fisie. Na izany aza, io vanim-potoana manan-kery io dia azo namboarina mifanaraka amin'ny filanao. Azo atao koa ny manamboatra ny atiny haseho amin'ny fotoana fisintomana ary koa ny famolavolana ny pejy fisintomana. Ho fiarovana tsara kokoa ny fisieo, azonao atao ny manampy ny teny miafina mba hifandraisana amin'ireo mpandray anao.
pCloud mandefa rakitra hatramin'ny 5 GB. Miaraka amin'ireo fanovana vaovao natao tamin'ity fitaovana famindrana ity dia azo atao izao ny mandefa rakitra hatramin'ny 10 GB ny habeny! Ny fiasana amin'ity sehatra ity dia tsy mitaky fisoratana anarana mialoha ary ny fandefasana rakitra amin'ny alàlan'ny mailaka dia tsy mahazo afa-tsy mpandray folo isaky ny mandeha. Ny sehatra dia manome hafainganam-pandeha mahavariana izay tsy miankina amin'ny haben'ny rakitra. Ny fetra fitahirizana maimaim-poana isaky ny mpampiasa dia mety hatramin'ny 20 GB.
Filemail tena tsara tranonkala ho an'ny fandefasana rakitra lehibe. Mamela ny fandefasana rakitra mihoatra ny 30 GB! Tsy voafetra ny fisintomana amin'ity tranonkala ity satria ny fahamendrehan'ny rakitra dia raikitra ao anatin'ny 7 andro. Filemail dia sehatra iray izay mifangaro mora foana amin'ny mailakao. Manolotra rindranasa sy plugins ho an'ny fitaovanao (Android, iOS). Tsy mila fisoratana anarana na fametrahana karazana ho an'ny mpampiasa izany. Mora ampiasaina, azo itokisana ary haingana.
ity iray ity est un rindrambaiko malalaka ho an'ny fandefasana rakitra mavesatra. Ity tranonkala ity dia mamela anao handefa rakitra amin'ny tsiambaratelo tanteraka. Ny volombato avo indrindra ho an'ny rakitra tsirairay dia tsy voalaza ao amin'ny tranokala. Ny vanim-potoana maharitra dia miova arakaraky ny zavatra ilainao (andro, herinandro, iray volana na roa volana). Azo atao mihitsy aza ny mamafa mivantana ny rakitra iombonana raha vao mandefa voalohany raha tianao. Ny halalin'ny fiainana manokana eto amin'ity tranokala ity dia ambony. Ny rakitra voatahiry dia nozaraina sy notehirizina teo amin'ny servers raha tsy afaka mamaha azy ireo.
HAMAKY Mahaiza mitantana amim-pahombiazana
File Dropper dia afaka mandefa ny haben'ny 5 GB. Tsy ilaina ny fisoratana anarana toy ny any aloha tranonkala. Ny fotoana fanangonana rakitra ao amin'ny tranokala dia andro 30. Manome anao fotoana ampy hizarana ny rohy download miaraka amin'ireo mpandray anao. Azo atao ny mandefa karazana rakitra ao amin'ity sehatra ity. Teo horonam-peo, horonan-tsary, sary, rakitra an-tsoratra, sns. Ny rohy raki-daza novokarina dia azo zaraina miaraka amin'ny mpandray anao samihafa na zaraina amin'ny tranokala hafa sy forum.
Ge.tt miasa toy ny zaza vaovao miaraka amin'ny fetran'ny fetra voafetra ho an'ny 250 MB ihany koa. Ireo tahiry eto dia voatahiry mandritra ny andro 30. Ity tranonkala ity dia manolotra fanitarana sy fangatahana ho an'ny Outlook, iOS, Twitter ary Gmail. Alefaso tsindry ary alefao mba hampakatra ilay rakitra ao amin'ilay tranonkala. Amin'ity sehatra ity, tsy voatery miandry ny rakitra ianao mba hamita ny entana mba hahazoana rohy download. Sarotra ilay safidy voafidy, efa misy ao anaty aterineto.
Tsy misy fetra voafetra amin'izany tranonkala ho an'ny fandefasana rakitra lehibe. Ny rohy fampidirana novokarina eto dia fampiasa tokana (izany hoe iray ihany ny mpandray ary miasa indray mandeha fotsiny). Raha ny tena izy, ny valiny amin'ny rohy download ao amin'ny JusBeamlt dia minitra 10. Aorian'io fotoana io dia mila mamorona rohy download vaovao ianao. Mitandrema ny manakatona ny varavarankely rehefa mandefa ny raki-tahiry noho ny tahotra ny hamoaka rohy download tapaka. Io fepetra io dia tena ilaina ho an'ny mpandray anao handray ny rakitra iombonana.
Ao amin'ity sehatra ity, azonao atao ny misafidy ny androm-piainan'ny rakitrao: manomboka amin'ny 30 minitra ka hatramin'ny roa herinandro izany. Senduit dia mety ihany koa amin'ny fitazonana ny tsiambaratelo momba ny antontan-taratasinao. Ny rakitra apetraka eto dia tokony hanana habe 100MB farafahakeliny. Raha hizara ilay rakitra amin'ny mpandray anao dia apetraho fotsiny amin'ny tranokala ary alefaso ny rohy fampidinana manokana any amin'ny mpandray anao. Ity tranokala ity dia mora ampiasaina raha tsy tianao ny hidiran'ny olona amin'ireo rakitrao mora tohina.
Ity sehatra ity dia malalaky ny mpankafy fampidinana satria mirakitra rakitra amin'ny endriny rehetra: PDF, ebook, audio, video, sns. Ao amin'ny Zippyshare, tsy misy fetra fampidinana. Tsy toy ny maro tranonkala fifampizarana tranonkala izay mametra ny habetsaham-pandraharahana ho tsy misy na inona na inona raha tsy mandany vola, manome toerana malalaka ny habaka ary malalaka tanteraka. Tsy misy fisoratana anarana na takiana.
HAMAKY Ahoana no fomba handaminana ny sehatrasanao?
Ny marina ny rakitra ao ity tranonkala ity dia miovaova eo anelanelan'ny andro 7 sy 14. Azo atao izany famindrana rakitra mavesatra Volan'ny 10 GB isaky ny famindrana. Na izany aza, tsy voalaza ny isan'ireo fifindrana azo atao isan'andro. Toa azo zaraina amin'ny olona maro ireo tahiry ireo, raha tsy voalaza ny fetra. Ny hafatra manokana dia afaka miaraka amin'ny famindrana rakitra araka ny safidinao. Ny haingam-pandeha ato dia miankina amin'ny kalitaon'ny fifandraisana misy anao. Amin'ny fifandraisana tena tsara, ny fifindrafana kely dia atao ao anatin'ny segondra vitsy.
Toeram-pandaharan-tarehy avo be, dia mamela izany fandefasana rakitra mavesatra ho an'ny olona mihoatra ny iray isaky ny mandeha. Ny fetran'ny fandefasana rakitra dia napetraka ao amin'ny 20 Go ambanin'ny version malalaka. Ny antontan-taratasy voaraikitra dia voatahiry ao amin'ny tranokala hatramin'ny andro 7. Ny dikan-teny vaovao amin'ny sehatra dia novaina ho takelaka sy smartphones. Ny fampiakarana ny rakitra dia haingana, tsotra ary azo antoka.
Tsy tahaka ireo sehatra maro sy serivisy lehibe mifampizara fisoratana, Sendspace dia ahafahanao mizara ny rakitrao mivantana eo amin'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter sy Facebook. Manana safidy ianao hampidirinao ny rakitra 300 MB. Ny fotoana fitehirizana ny rakitrao dia voafetra amin'ny andro 30. Na dia izany aza dia ilaina ny manamarika fa ny fifampizarana eo amin'ny tarika dia voafetra amin'ny alàlan'ny rindran-tserasera. Tsy misy fangatahana takiana amin'ny fampiasana azy maimaim-poana. Miaraka amin'ireo tsi-tsotra vitsivitsy dia mizara ny antontan-taratasy ianao.
Catupload dia azo antoka ary tsy mitaky fisoratana anarana. Eo am-pifaneraserana amin'ilay tranokala, dia marihintsika fa mahafinaritra ny dokam-barotra. Ity tranonkala ity dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa ny rakitra rehetra mankany 4 Go. Azonao atao ny manisy rakitra lehibe amin'ny endrika maromaro nefa tsy misy famerana. Ny rohy tokana dia ampiasaina ho an'ny rakitra mavesatra ary mifindra amin'ny fifandraisana izay efa noteneninao. Azo atao ny mandefa ny rakitra amin'ny alàlan'ny mailaka ary mametraka ny tenimiafina ho fiarovana tsara kokoa.
Noho izany raha te handefa antontan-dahatsoratra lehibe toy ny horonan-tsary, rindrambaiko, antontan-taratasy PDF ianao ... ireo tolotra an-tserasera ireo dia hahafeno ny zavatra antenainao. Tena malalaka izy ireo ary tsy mitaky fisoratana anarana. Ankoatra izany, maro amin'ireo sehatra ireo dia manana fampiharana amin'ny asa ataony amin'ny iOS na Android. Tena mahafinaritra ny mandefa haingana lehibe amin'ny rakitra smartphone.
Ny tolotra amin'ny aterineto tsara indrindra amin'ny fandefasana rakitra lehibe tsy misy fisoratana anarana. May 13th, 2020Tranquillus
Teo alohaNy teny filamatry Weelearn: Look-Learn
manarakaFamatsiana ny fampiofanana matihanina, toro-lalana mahomby
Ahoana no fomba handaminana ny sehatrasanao?
Mahaiza mitantana amim-pahombiazana
Ahoana ny fomba fiasa amin'ny sehatra malalaka?